Maamulka gobolka Bakool oo mamnuucay in qaad laga dejiyo Xudur:DHAGEYSO | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maamulka gobolka Bakool oo mamnuucay in qaad laga dejiyo Xudur:DHAGEYSO
Maamulka gobolka Bakool oo mamnuucay in qaad laga dejiyo Xudur:DHAGEYSO
Bokool(SONNA) Kulan looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa Ammaanka iyo xasiloonida Gobolka Bakool ayaa lagu qabtay Magaalada Xudur ee Xaruunta Gobolkaasi,iyadoo ay ka soo qeybgaleen mas’uuliyiin iyo saraakiil.
Waxaa uu soo qaban qaabiyaay kulanka maamulka Degmada Xudur,iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen Ma’suuliyiinta maamulka Degmada,Saraakiisha Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya,waxaana inta badan Xoogga lagu saaray Iskaashiga dhanka Ammaanka magaalada Xudur iyo guudahaanba Gobolka Bakool,iyadoo maamulka uu soo saarey awaamiiro cusub oo amniga laxiriira.
Maxamed Cabdi Maxamed Told Guddoomiyaha Gobolka Bokool ayaa sheegay in waxqaad ah la keeni Karin magaalada Xudur ilaa amar dambe.
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya ayaa Gobolka Bakool waxaa ay ka wadaan guluf dagaal oo maleeshiyaadka Nabad diidka Al shabaab looga saarayo deegaanada yar yar ee ay kaga harsan yihiin Gobolkaasi iyadoo ay jirto in maleeshiyaadku ay jareen wadooyinka soo gala Magaalada Xudur ee Xaruunta Gobolka Bakool.
Previous articleFAALLO:Saldhig Milatari oo Mustaqbalka loo aayi-doono!!!
Next articleKulan looga hadlayay amniga oo lagu qabtay Xudur